2 Makoronike 22:1-12
22 Zvino vagari vomuJerusarema vakagadza mwanakomana wake wegotwe Ahaziya+ kuti ave mambo panzvimbo pake, (nokuti boka revapambi rakauya kumusasa nevaArabhu+ rakanga rauraya vakoma vake vose,)+ uye Ahaziya mwanakomana waJehoramu akatanga kutonga samambo waJudha. 2 Ahaziya akanga aine makore makumi maviri nemaviri paakatanga kutonga,+ uye akatonga kwegore rimwe chete ari muJerusarema. Amai vake vainzi Atariya+ muzukuru waOmri.+ 3 Iyewo akafamba nenzira dzeimba yaAhabhi,+ nokuti amai vake+ ndivo vaimupa mazano okuita zvakaipa. 4 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvaiitwa neimba yaAhabhi, nokuti ivo ndivo vaimupa mazano+ pashure pokufa kwababa vake, zvikazomuparadzisa. 5 Akaitawo maererano nezano ravo,+ zvokuti akaenda naJehoramu+ mwanakomana waAhabhi mambo waIsraeri kunorwa naHazaeri+ mambo weSiriya kuRamoti-giriyedhi,+ uko vapfuri vakapfura Jehoramu.+ 6 Nokudaro akadzoka kuJezreeri+ kuti arapwe maronda aakanga akuvadzwa kuRama+ paakarwa naHazaeri mambo weSiriya. Azariya+ mwanakomana waJehoramu+ mambo waJudha akaenda kuti anoona Jehoramu+ mwanakomana waAhabhi kuJezreeri, nokuti akanga achirwara.+ 7 Asi kuparara+ kwaAhaziya kwakabva kuna Mwari+ nokuenda kwaakaita kuna Jehoramu; uye paakasvika, akaenda+ naJehoramu kuna Jehu+ muzukuru waNimshi,+ akanga azodzwa+ naJehovha kuti aparadze imba yaAhabhi.+ 8 Zvino Jehu paakangotanga kukakavadzana neimba yaAhabhi,+ akawana machinda aJudha nevanakomana vehama dzaAhaziya,+ vashandi vaAhaziya, akavauraya.+ 9 Akabva atanga kutsvaka Ahaziya, vakazomubata,+ zvaakanga akavanda muSamariya,+ vakaenda naye kwaiva naJehu. Vakabva vamuuraya, vakamuviga,+ nokuti vakati: “Iye muzukuru waJehoshafati,+ uyo akatsvaka Jehovha nomwoyo wake wose.”+ Hapana weimba yaAhaziya aikwanisa kuva nesimba roumambo. 10 Zvino Atariya+ amai vaAhaziya, vakaona kuti mwanakomana wavo akanga afa. Naizvozvo vakasimuka, vakaparadza vana vose voumambo veimba yaJudha.+ 11 Zvisinei, Jehoshabheyati+ mwanasikana wamambo akatora Jehoashi+ mwanakomana waAhaziya, akamuba pakati pevanakomana vamambo vaizourayiwa, akamuisa iye nomukadzi aimurera muimba yokurara yomukati. Jehoshabheyati mwanasikana waMambo Jehoramu,+ mudzimai womupristi Jehoyadha,+ (nokuti iye akanga ari hanzvadzi yaAhaziya,) akaramba akamuvanza nemhaka yaAtariya, uye haana kumuuraya.+ 12 Akaramba ainavo muimba yaMwari wechokwadi akavanzwa kwemakore matanhatu,+ Atariya paakanga achitonga nyika+ ari mambokadzi.+